Arrin qoys - VIP truffles
Bogga ugu weynSheeko qoys
Soo ogow, bixi oo dhadhamiso dhalooyinka madow ee ka yimaada Périgord oo leh dhadhan gaar ah
La madow Périgord truffle waa saxan dhadhan gaar ah leh, oo leh qaab qurxoon. Iyadu waa u gaar ah dhadhankeeda iyo soo saarayaasha ayaa dhif ah. Tani waxay ka dhigeysaa iyada hadiyad ku habboon fasaxyada kirismaska.
Gawaarida madow, Tuber Melanosporum oo loo yaqaan 'Périgord Black Truffle'
Anaga ahaan, tan fungus gaar ah waa sheeko qoys oo ka bilaabata awoowgeen. Magaciisu wuxuu ahaa Albert Rouland, wuxuu ku dhashay July 3, 1903 tuulo la yiraahdo Condat sur Vézère, oo ku taal koonfurta Faransiiska, waaxda hadda ee Dordogne. Waqtigaas, agglomeration wuxuu ka mid ahaa degmo la yiraahdo the Périgord. Waa degmadan, biotope iyo microclimate gaar ah oo magaca u bixiyay shufkeenna gaarka ah.
Awoowe geedkii weynaa ee ugu weynaa
Awowgay wuxuu ku dhex noolaa labada Dagaal ee Adduunka. Da'diisuu si fir fircoon ugama qeyb galin isku dhacii ugu horeeyey, dhanka kale wuxuu kujiray safka hore isku dhacii 39-45. Xitaa wuxuu muddo ku qaatay maxbuus ku ahaa Jarmalka, beer. Taariikhdeeda leh fiisa wuxuu bilaabmaa dhamaadka dagaalka, markuu isagu ku noqdo Perigord dhalasho oo iibso dhulkiisii ​​ugu horreeyay. Nasiibkiisu wuxuu ahaa in ay horey u jireen geed geed truffle. Waxay u dhowdahay oo keliya xididdada geedkan ee baxa likaha dhulka hoostiisa midab madow oo midabkiisu madow yahay oo aan ugu yeerno madow Périgord truffle. Magaca sayniska waa Tuber Melanosporum.
Dhaqan ka ab ka ab u sii gudbinayey
Albert Rouland aad ayuu nasiib u helay juquraafi ahaan dhulkiisa. Tan dambe waxaa ka gudbay tog aan weligiis engegin, xitaa xilliyada ugu qalalan! Biyo ayaa dhex mara 365 maalmood sanadkii, taas oo waxtar badan u leh dhirta ku xeeran. Geedkii halkaas ka baxay ayaa ka faa'iideysanaya sahay nafaqo leh iyo qoyaan haddii loo baahdo. Bilowgii jiilaalka, awowgay goostay xamuul mahadsanid goosashada duqsiga (fiiri fiidiyaha hoose), isticmaalkeeda. Wuxuu ugudbiyay dhaqankan waalidkeen, kuwaas oo markii dambena bilaabay ubadkooda: walaalkay iyo aniga.
Saddexda shey ee aan soo saarnay:
Maanta, dhulka reerku waa Hektar 26. Laga soo bilaabo 2012, labadeenna, jiilka saddexaad, waxaan go'aansannay inaan beero dhawr geed oo kale sannad kasta. Waxaan go'aansanay inaan adduunka u bandhigno dhadhanka gaarka ah iyo kuwa gaarka ah in awoowgeen ayaa dhaxal ahaan nooga tagay. Bon vivant, wuu ku faani lahaa inuu kugu baro argagaxisadiisa oo uu kula wadaago dhadhankan: Tan awgeed, waxaan soo saarnay 4 badeecadood oo caan ah:
box Sanduuqa hadiyadda (ku raaxeysiga wax bixinta)
box Sanduuqa "daahfurka" (isku darka sanduuqyada hadiyadaha iyo sanduuqyada "old el Paso" (xirmooyinka alaabta jikada u diyaarsan in la cuno) Xaflada VIP loogu talagalay 2, 4 ama 6 qof, cuntada diyaarinta waxaa ka mid ah)
ï Iyo saxanka "gourmet" (sanduuqa aperitif)
oil Saliid saytuun ah noolaha madow oo leh udgoon dabiici ah oo madow madow ah (saliida PDO ee ka socota Vallée des Beaux de Provence)
Xagga sare, xagga sare, sawirkii awowgay iyo aniga 1974-kii oo ku yaal geedaha qashin-qubka.
Hoosta, fiidyow hooyaday ka raadinayso qashin duullimaad.Waxaad sidoo kale arki kartaa guga caanka ah, kaasoo noo ogolaanaya inaan waraabiyo qashinkeena ilaa maanta.
Salad cagaaran oo leh vinaigrette madow truffle vinaigrette »
Cinwaanka emailkaaga lama daabici doono. Beeraha loo baahan yahay waxaa lagu calaamadeeyay *
Ii ogeysii faallooyinka dabagalka emaylka.
Ii ogeysii fariimaha cusub e-mayl.